Home News Xildhibaanada oo soo Bandhigay 37-deegaan oo Ciidamada DFS kasoo baxeen tan iyo...
Xildhibaanada oo soo Bandhigay 37-deegaan oo Ciidamada DFS kasoo baxeen tan iyo markii Farmaajo la doortay!!
Xildhibaanadii Mooshinka ka gudbiyay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo), ayaa sheegay inta uu xilka hayo Madaxweynaha ay ciidanka dowladda Federaalka Soomaaliya ay kasoo baxeen 37-magaallo.
Xildhibaan C xakiin Macalin Axmed oo kamid ah Baarlamanka oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in Madaxwynaha uu ku fashilmay balanqaadkiisa ahaa in uu wax ka qaban doono amniga dalka.
Sidoo kale waxa uu sheegay in amni la sugo iska daayee ay Dagaalyahanadda Al-shabaab ay lacago canshuur ah ka qaadaan Shacabka iyo Ganacsatada Magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya.
Xildhibaano ka Tirsan Baarlamanka Soomaaliya oo tiro ahaan gaaraya 94-mudane ayaa xalay Mooshin xil ka qaadis ah ka gudbiyay Madaxweyne Farmaajo.
Previous article3-ruux oo is reer ah oo lagu dilay Magaalada Muqdisho
Next articleBarakacayaal iyo Ciidanka Boliiska oo Bannaanbax loo soo saaray Waddooyinka Xamar.
Axmed Madoobe ” Shabaab Waa Inaan Ka Saar Deeganada Ay Gacanta...